April | 2009 | သီရိရတနာ
ထမင်း ဟင်းချက်တာ ၀ါသနာပါတဲ့ သမီး Angel အရုပ်လေးတွေနဲ့အတူ တကယ်ချက်နည်း ကစားနေတာ။ ဖယောင်းတိုင်ကတော့ အိမ်မှာ အလှထွန်းတဲ့ ဖယောင်းခွက်လေးတွေကို သုံးလိုက်တယ်။ မီးအတွက်လည်း စိတ်ချရတယ်လေ။ နေ့လယ် နေ့ခင်းဆိုရင်တော့ ၀ါရန်တာက သံမံတလင်းမှာ ချက်တမ်း ပြုတ်တမ်း ဆော့တာပဲ။ အခုက ညနေစောင်းနေပီဆိုတော့ လေတွေက တိုက်တော့ ဖယောင်းတိုင်က ခဏ ခဏ ငြိမ်းသွားတာနဲ့။ ဒီနေ့ကတော့ အိမ်ထဲမှာ ဆော့လို့ စားပွဲသေးသေးလေး ခင်းပေးလိုက်တယ်။ သမီး အရုပ်တွေထဲက ဒန်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဒန်အိုးထဲကို သောက်ရေသန့်ထည့် မီးဖိုပေါ်တင်ပီး ရေနွေးတည်။
ဒန်ဒယ်အိုးထဲကို ဆီထည့် ဆီပူလာရင် sausage ကို ပါးပါးလှီးထားတာ ထည့်ကျော်။ တခြားနေ့တွေကတော့ သီဟိုစေ့ကျော်၊ ကြက်ဥခေါက်ထားတာကျော်။ ဒီနေ့ကတော့ sausgae ပဲ ကျော်။
ကျက်ရင် သားသားက စား။
City Mart က ၀ယ်လာတဲ့ ရေခဲမုန့်ဗူး လေးယောက်စားလို့ရတဲ့ဗူးအလတ် (၁၅၀၀ ကျပ်) ကို အိမ်မှာရှိတဲ့ သီဟိုစေ့၊ ဂျယ်လီ၊ စပျစ်သီးခြောက်၊ သရက်သီးစိပ်၊ ချောကလက်ရည်ဆမ်းပီးစား။
သမီးလေး၏ ဟင်းချက် ကစားနေသောပုံများ
Date : April – 30, 2009 (Thu)
By Thet Nandar • Posted in Angel, Play in home	• Tagged My Daughter, Picasa Web Album, Play in home
ဒီပုံလေးကတော့ မမ Angel ရေကူးကန်မှာ စီးတဲ့ ကွင်းထိုးဘိနပ်ကို ယူစီးပီး လမ်းလျှောက်နေတာ။ အိမ်မှာ ရှိတဲ့ ကွင်းထိုးဖိနပ်တွေ အကုန်လုံး တွေ့တာနဲ့ လျှောက်စီးနေတော့တာပဲ။ ဘဘ ဘိနပ်လည်း မချွတ်ထားနဲ့။ ချွတ်ထားတာနဲ့ သားသားက စီးပီးသားပဲ။
ခြေစုံ Jamp လည်း ခုန်တတ်နေပီ။
သွားက အပေါ် ၆ချောင်း အောက် ၄ချောင်း (အဖြူအရာလေး ၂ချောင်းကတော့ အောက်ဘက်မှာ နည်းနည်းပေါ်နေပီ)
နံရံမှာ ချိတ်ထားတဲ့ တယ်လီဖုန်းကို ပြောဖို့ ကြိုးစားနေပုံ။ တယ်လီဖုန်း ပျက်မှာစိုးလို့ နံရံမှာ ချိတ်ထားတာကို မရ ရအောင် ဖုန်းခွက်ကို ရအောင် ယူပီး စကားပြောနေတာ။ မာမီက ဒယ်ဒီနဲ့ အင်တာနက် VZO web cam ကနေတဆင့် စကားပြောနေတာ။ အနောက်မှာ သားသားက တယ်လီဖုန်း ကြိုးကို လှုပ်ချပီး စကားပြောနေတာ။ ဒယ်ဒီတောင် အွန်လိုင်းကနေတဆင့် တိုက်ရိုက်ကြီး တွေ့လိုက်သေး။ အင်တာနက် web cam နဲ့ နံရံမှာ ချိတ်ထားတဲ့ တယ်လီဖုန်းနဲ့က မျက်နှာချင်းဆိုင်မို့လို့လေ။ မာမီလည်း ချက်ချင်း တယ်လီဖုန်းကို သားသားဆီက ပြန်ယူ သူ့ နေရာပြန်ထား။ ကင်မရာကို ယူပီး ချက်ချင်း အမှတ်တရ မှတ်တမ်းတင်လိုက်တာ။
သားသားနဲ့ သမီးလေးကိုတော့ မာမီ အတတ်နိုင်ဆုံး မဆူဘူး။ မရိုက်ဘူး။ နှုတ်ကနေ တဆင့်ပဲ ဆုံးမတယ်။ မလုပ်စေချင်တဲ့အရာတွေကို စကတည်းကကို ရှောင်ထားလိုက်တယ်။ ဥပမာ သားသား အိမ်ဖွတာ မကြိုက်ဘူး။ စာအုပ်တွေ စီဒီချပ်တွေ ဖွတာ မကြိုက်ဘူးဆို အဲဒီပစ္စည်းတွေကို အခန်း သပ်သပ်ထားပီး သိမ်းထားလိုက်တယ်။ ကလေးတွေ သွားလို့ရတဲ့ နေရာတွေပဲ အတတ်နိုင်ဆုံးသွားတယ်။ တချို့ နေရာတွေက လူကြီးတွေနဲ့ဆိုတော့ ကလေးတွေကို တဟန့် ဟန့်နဲ့ ဟန့်နေရတာ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် စိတ်ဆင်းရဲလို့လေ။ ကလေးလည်း စိတ်ပင်ပန်း။ သူ လုပ်ချင်တာကို လုပ်လို့မရ။ မာမီလည်း စိတ်ညစ်ခဲ့ဖူးတော့ နောက်ဆို သွားကို မသွားတော့တာ။ စကတည်းကကို သားသားနဲ့ သမီးလေးတို့ မလုပ်စေချင်တဲ့အရာတွေကို မာမီက ရှောင်ထားလိုက်တာပါ။ ချစ်လွန်းတော့လည်း မဆူရက်ဘူးကွယ်။
သားလေး ကုတင်ပေါ်ကို တွဲတက်နေတာ။ ကုလားထိုင်တို့ mommy တို့ ကုတင်က သားသား ၆ လ သားလောက်ကတည်းက တက် တတ်နေတာ။ သားသားရဲ့ ကုတင် အမြင့်ကိုကျတော့ အခု ၁၄ လ သားလောက်မှ တက် တတ်နေတာ။ (၂၃.၄.၀၉) Google video က အခုရက်ပိုင်း upload video လုပ်လို့မရ။
We are no longer offering uploads to Google Video. This
information is for those who have previously used Google Video to upload their
ဒီစာတမ်းပေါ်နေတယ်။ Google ဘက်ကနေဖြစ်နေတာ။
***** 13 Months *****
~~~~ @@@ ~~~~သားသား ၂ထပ် ကုတင်လှေကားကို တက်လိုက်ဆင်းလိုက် လုပ်တတ်နေတာ ။ သတိထား ကြည့်နေရတယ်။ သူ့ကိုယ့်သူတော့ လက်ကို မြဲနေအောင် ကိုင်ထားတာပဲ။ daddy, mommy & Angel အသည်းပေါက်မတတ်ချစ်ရတဲ့ သားသားလေးမို့လို့ မျက်စိကို ဒေါက်ထောက်ပီးကြည့်နေရတယ်. မျက်စိအောက်ကကို အပျောက်မခံရဲဘူး။ မလိုအပ်ရင်တော့ အဲဒီ dressing room ကို တံခါးပိတ်ထားလိုက်တယ်။ လှေကားပေါ်က ပြုတ်ကျမှာ ကြောက်လို့လေ။
သားလေး လျှော အမြင့်ကို မကြောက် မလန့် ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ စီးနိုင်တဲ့ သတ္တိကို ဗီဒီယို မှတ်တမ်း တင်ထားတာ။
***** 1 year old *****
***** 11 Months *****
*****9Months *****
****** 8 Months ******
******61/2 Months *****
*****5Months *****
*****3Months *****
By Thet Nandar • Posted in 01 Month - Baby Smile, 03 Months - Baby roll, 05 Months - Baby Sit, 06 and half Months - baby crawl, Henry, Henry's Development	• Tagged baby development, my son, Photo, Video
Mommy’s 36 Birthday
2day .. Mommy’s Birthday ပါ။ သမီး နဲ့ သားလေး မာမီ ဘေးမှာ အခု အချိန် ရှိနေတာကိုက မာမီရဲ့ ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင် တစ်ခုပါပဲ။ နားလည်နေပီ ဖြစ်တဲ့ သမီးကိုတော့ ပြောဖြစ်ပါတယ်။ မာမီ အသက်ဘယ်လောက်ကြီးကြီး မာမီ မွေးနေ့တိုင်းမှာ သမီးနဲ့ သား မာမီ ဘေးနားမှာ ရှိရင် မာမီ အရမ်းဝမ်းသာတယ်။ ပျော်တယ်လို့ သမီးက မျက်ရည်ကျပါတယ်။ မာမီနဲ့ပဲ အတူတူ နေမယ်လို့လည်း သူ အထပ်ထပ် ပြောပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ သမီးလေးရယ်။
သမီးလေးရဲ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင်ကတော့ သူ့ကိုယ်တိုင် စိတ်ကူး ပုံဖော်ပြုလုပ်ထားတဲ့ Birthday card နဲ့ စက္ကူပန်းအိုးပါ။ pink paper မှာ သူ့ ကြိုက်တဲ့ barbie sticker လေးတွေ ကို ဇာတ်လမ်းလေးတွေနဲ့ ကပ်ပီး စာတွေ ရေးထားပါတယ်။ ပီးရင် Birthday card ပုံစံ ခေါက်ထားတယ်။ သမီး ကိုယ်တိုင် လုပ်ပေးထားတဲ့ Birthday card မို့လို့ တန်ဖိုးထားပါတယ်။ paper vase ကတော့ pink color paper တွေကို ကတ်ကျေးနဲ့ ညပ်ထားပီး ကော်နဲ့ သုပ်ထားတယ်။ တခုနဲ့ တခုကို ကပ်ထားလိုက်ပီး ချစ်စရာ pink paper vase လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်လည်မှာလည်း ပန်းပုံစံ ဒီဇိုင်းလေးတွေ ပုံဆွဲထားပါသေးတယ်။ ကျေးဇူးပါ သမီးလေးရယ် … တခုခု ၀ယ်ပေးတာထက်. မာမီ မွေးနေ့ မရောက်ခင် သမီး အခန်းတံခါးပိတ်ပီး ကိုယ်တိုင် စိတ်ကူးလေးနဲ့ လုပ်ပေးထားတဲ့ သမီးရဲ့ မာမီ ၃၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့လက်ဆောင်ကို မာမီ တန်ဖိုး ထားတယ် သမီးလေး။
Date : April – 20, 09 (Mon)
By Thet Nandar • Posted in THET NANDAR	• Tagged THET NANDAR
Mommy’s 36 years birthday – April – 20, 2009 (Mon)
မာမီ ၃၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အမှတ်တရ မိသားစုဓာတ်ပုံများ
Angel’s7years birthday – January – 11, 2009 (Sun)
သမီးလေး Angel ၇ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အမှတ်တရ မိသားစု ဓာတ်ပုံများ
Heaven @ Henry’s 1 year birthday – November – 23, 2008 (Sun)
Henry's 1 years Birthday
သားလေး Henry M. Latt @ ကောင်းစေလတ် တစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အမှတ်တရ မိသားစု ဓာတ်ပုံများ
Angel’s6years birthday – January – 11, 2008 (Fri)
Angel's6years Birthday
သမီးလေး Angel Mg Mg @ ရတနာ ၆နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အမှတ်တရ မိသားစု ဓာတ်ပုံများ
By Thet Nandar • Posted in Birthday	• Tagged Birthday, family, Picasa Web Album
Web Site Link _ TND
Kid Grow Online
Blog (Computer – IT Blog)
C Crazy – Virus များနဲ့ ကခုန်ခြင်း
CMS (Chan Mya Soe)
Zaw Min Tih
Lu Lu – ဟင်းချက်နည်း
Lucious – ဟင်းချက်နည်း
သန္တာအောင် (မိခင်မေတ္တာ) (Singapore)
Queen Sandi (Singapore)
June One (Singapore)
We She Me (Austria)
The cox family zoo
Myint Mo Oo (သွားကျန်းမာရေး)
Child Health & Other Health
တီး ရဲ့ အိမ် (ရပ်နားထား) (USA)
Myanmar & other News
Royal Myanmar (Singapore)
Juneone (Family Blog)
The Queen (Family Blog)
Home Sweet Home (Family Blog)
NSA – Nyein Su Aye
by pass web site
IP address Email Header ကို Paste , Trace Email Sender – click
win myanmar fonts download link
Morning coffee (firefox)
New York City Uni
New York State Uni
English to English & Myanmar Dictionary
2009 myanmar – english calendar
Myanmar web site search
internet web site guide
Singapore Home/ Job Agent
ဖုန်းနံပါတ်သိတာလေးနှင့် အိမ်လိပ်စာကို တန်းပြီးစုံစမ်းလို့ရ
SG (myanmar free movie)
myanmar academy 2009
myanmar movie, vcd & korea series
baby & I korea moviel
baby & I (you tube) english subtiles
Slumdog Millionaire (india movie)
သီချင်း (ဘာဘူ၊ တော်တော်စုံတဲ့ သီချင်းများ)
myanmar cartoon (လောကနတ်စာပေ) ဘိုဘိုကာတွန်း
၀ိညာဉ်သစ် – မြန်မာဝတ္ထုပေါင်း မြောက်များစွာ
လွန်းထားထား – သဝန်တိုတယ်
download ဆွဲဖတ်ရမယ့် စာအုပ်များ
myanmar actor & actress picture
Dr. Win Thein (ကော်ဖီသောက်ခြင်း ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုး)
သံစဉ်လှိုင်း forum, movie & song
Free International Ph Calls
Friend web address
Aung Linn (Austria)
Ye Pyae Hein’s Photo
Search Austria Job
myanmar time newspaper
လောကအလှ online magazine
GPS Mobine Phone
ခေတ်လူငယ် ဒေါ်လာဈေး၊ ရွှေဈေး တွေကို အကြည့်များတဲ့ ၀ပ်ဆိုဒ်
dubai newspaper – english language – dubai က မြန်မာမိန်းမ အသတ်ခံရတဲ့သတင်း ဒီမှာ နှိပ်ပီးကြည့်။ သတ်သူ မိပီ။
Singapore News –singapore က merlion မိုးကြိုးပစ်ချခံရသတင်း ဒီမှာ နှိပ်ပီး ကြည့်
Start Time- Singapore News … NTU prof ကို indo ကျောင်းသားက ဓါးနဲ့ထိုး ဒီမှာ
မြန်မာ ကုသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုးချုပ် ဦးသန့်
Buddist – အရှင်ကောဝိဒ – မဇျွိမ ဂုဏ်ရည်
ဆရာဦးမြင့်လွင် – သန့်တည်ပွား
ပရိတ်ကြီး ၁၁ သုတ် (download)
Starhub mobile web SMS
online myanmar book shopping
singapore online book shop
soccer : myanmar language soccer news
soccer : chelsea (myanmar language)
ကန်တော်ကြီးရေကူးကန် သင်တန်း 2009 နွေရာသီ
From (The First Myanmar Rss News Portal)
ရန်ကုန် တိုင်း( မ် )
perfect magazine news
မြန်မာ တိုင်း( မ် ) ဂျာနယ်
Myanmar National League Official Site
မန်ယူ ကလပ် (MUTFun)
ဇော်ဂျီ ကီးဘုတ် လက်ကွက
ဝင်း ကလော ကီးဘုတ BETA
မြန်မာ လက်ကွက် လေ့ကျင့်ရန် Tutor
sm3 မြန်မာ မိုဘိုင်းလ ပြက္ခဒိန်
မြန်မာ မိုဘိုင်းလ် အဘိဓာန် ( Mystery Zillion)
Free Myanmar Travel Information eBook
Useful Download List
ourmemories ebooks collections
Yellow Pages Myanmar.Net
Myanmar Yellow Pages.Biz
Govenrnment Ministries Directory
နက္ခတ် ဗေဒင်မင်္ဂလာအခါပေး ပြက္ခဒိန်
perfect magazine ဗေဒင်
ရွှေစကား တနှစ်တာ ဟောစတမ်း
်ဗေဒင် related articles
်ဗေဒင် related ebooks download
ပုလဲနက် ရုပ်ရှင် အနုပညာသတင်း
လျှပ်တပျတ် celebrities News
လျှပ်တပျတ် ရုပ်ရှင် အနုပညာသတင်း
ရွှေအမြုတေ ရုပ်ရှင် အနုပညာသတင်း
ဇင်မီဒီယာ ရုပ်ရှင် အနုပညာသတင်း
People ရုပ်ရှင် အနုပညာသတင်း
ဖလားဝါးနယူး(စ်) ရုပ်ရှင် အနုပညာသတင်း
ဖိုးဝ ရုပ်ရှင် အနုပညာသတင်း
all-channel ရုပ်ရှင် အနုပညာသတင်း
burmeseclassic ရုပ်ရှင် အနုပညာသတင်း
Planet ရုပ်ရှင် မိတ်ဆက်
lexiconstar ရုပ်ရှင် မိတ်ဆက်
burmeseclassic latest vcd
ရွှေအိုး မြန်မာ ဇတ်လမ်း
ရွှေအိုး ကိုးရီးယား ဒရမ်မာ
luu nge diary
myanmarsongs.net Free MP3 Download
Zawgyi webtext editor
Zaw gyi Keyboard Layout Online
ZawGyi2Win converter
Win2ZawGyi converter
Making-Wordpress-Blog In Burmese
Learn Web Design in Burmese
Check aung bar lay lottery Result Online
CalculateaComputer Set Price Online
Khitlunge နေ့စဉ်ကုန်စည် ဈေးနှုန်း
tradenet ကုန်စည် ဈေးနှုန်း
Myanmar ကုန်သွယ်မှူ သတင်း
TradeNet နေ့စဉ်ကုန်စည် ဈေးနှုန်း
Int trade news
yangonmedia business reviews
SG/Malay exchange rate
commerce ကုန်သွယ်မှူ သတင်း
commerce နေ့စဉ်ကုန်စည် ဈေးနှုန်း
Weather.com ၁၀ ရက်စာ ခန့်မှန်းချက်
ပုလဲနက် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်
Mad’s Dictionary (Modern Words)
Pictorial Dictionary of Myanmar Fish
မဟာစည် သာသန ရိပ်သာ
dhamma audios collections
free dhamma mp3 download
Myanmar Celebrities Site
http://www.mysteryzillion.org/forums/archive/index.php?t-1727.html ===> Istein’s Sharing Good Websites You Know
By Thet Nandar • Posted in Web site link _ TND	• Tagged THET NANDAR, Web Site Link